musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kurwisa » Hurtigruten kune simba cruise zvikepe nehove dzakafa
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Kurwisa • Nhau Dzakanaka • nhau • Norway Kuputsa Nhau • Kutarisirwa • Technology • ushanyi • kutakura • UK Kuputsa Nhau
Kubviswa kubva kuhove uye imwe tsvina yemuchina ichakurumidza kushandiswa kumisikidza zvikepe zveHurtigruten zvezvikepe zvegreen green.
Iine zvikepe zvinowedzera zvezvikepe gumi neshanu, Hurtigruten ndiyo yepasirose yekufamba rwendo rwepasi rose. Iyo kambani yakaisa mari zvakanyanya mu green technology uye senge mabhatiri mhinduro - uye inoonekwa seye greenest cruise kambani yepasirese.
Nhanho inotevera: Kukwidza ngarava dzinokwenenzverwa neiyo yakasanganiswa biogas (LBG) - fossil-isina, gasi rinowedzerwazve rinogadzirwa kubva kuhove dzakafa uye imwe tsvina yemafuta.
- Ndezvipi zvimwe zvinoona sedambudziko, tinozviona sedura nemhinduro. Nekuunza biogas semafuta echikepe, Hurtigruten ndiyo ichave yekutanga kambani inofambisa ngarava nemafuta asina mafuta, akadaro Hurtigruten CEO Daniel Skjeldam.
Renewable biogas ndiyo yakachena sosi yesimba, inoonekwa seyakanyanya mafuta-anowanikwa parizvino. Biogas yatove kushandiswa semafuta munzvimbo diki dzechikamu chekutakura, kunyanya mumabhazi. Kuchamhembe kweEurope neNorway, iyo ine zvikamu zvikuru zvekuredza uye zvemasango zvinoburitsa huwandu hwakatsetseka hwemarara, ine mukana wakasarudzika wekuve mutungamiri wenyika mukugadzirwa kwebiogas.
Pakazosvika 2021, Hurtigruten inoronga kushandisa dzinosvika nhanhatu dzengarava dzayo pamubatanidzwa webiogas, LNG uye akakura emabhatiri mapakeji.
- Kunyange vakwikwidzi vari kumhanya pane zvakachipa, vachisvibisa mafuta anorema, ngarava dzedu dzinozopihwa simba nemasikirwo. Biogas ndiyo yakasvibira mafuta mukutakura, uye ichave iri mukana wakakura kune nharaunda. Tinoda mamwe makambani echikepe kuti vatevere, Skjeldam anodaro.
Kucheka mapurasitiki - kuvaka musanganiswa
Mushure mekupemberera makore zana nemakumi masere nemashanu nekuva wekutanga rwendo rwekufamba kurambidza kushandiswa kwepurasitiki kamwe chete, 125 ichatara zviitiko zviviri zvakasvibirira zveHurtrigruten:
Kuunzwa kwechikepe chekutanga chebhatiri-chakasanganiswa nemagetsi epasi rose, MS Roald Amundsen, tsika yakavakirwa kuitira kuchengetedza mashandiro mune mamwe emvura epasirese epasi seAntarctica.
• Kutanga kwechirongwa chikuru chekuvandudza girini, kuchitsiva chinyakare dhiziri propulsion nemabhatiri mapakeji neinjini dzegesi pane dzinoverengeka Hurtigruten ngarava.
Pamusoro pechinwiwa gasi rechisikigo (LNG), ngarava idzi dzinozovewo ngarava dzekutanga dzepasi rose kumhanya pane zvinodhaka zvebiogas (LBG).
- Hurtigruten's sarudzo yekushandisa biogas / LBG kubva kune yakasviba marara ndiyo mhando yekugadzirisa mhinduro dzatinotarisira. Iyo tsvina inonatswa kuita fossil isina simba. Mhinduro iyi zvakare inobvisa kuburitswa kwesarufa, NOx uye zvidimbu, Frederic Hauge, muvambi uye maneja mukuru weNGO Bellona Foundation anodaro.
Kune dzinopfuura mazana matatu ngarava dzepasi pano, mazhinji acho anomhanyisa pane zvakachipa, zvinosvibisa mafuta anorema (HFO). Kuburitswa kwemazuva ese kubva kune imwechete mega cruise ngarava inogona maererano nemaNGO kunge akaenzana nemiriyoni imwe mota.
- Hurtigruten chave chiratidzo chemaitiro ekuisa mutoro mukuita. Vakatora matanho anoverengeka akakosha ekuvandudza mamiriro avo emamiriro ekunze uye enharaunda. Iye zvino ivo vanounza mashandisirwo ezvekuvandudzwa muindasitiri yezvikepe uye izvo zvinotipa tariro yekuchinja nhanho mukutsvaga mhinduro dzisingagumi, Hauge anodaro.
Kuisa mari mazana masere mazana masere emadhora emadhora ekuvandudza uye green tech
Hurtigruten parizvino iri kuvaka ngarava nhatu dzakavhenganiswa dzinofambiswa nengarava kuNorway Kleven Yard. MS Roald Amundsen, MS Fridtjof Nansen uye wechitatu, hanzvadzi isina kutaurwa zita, achaendeswa muna 2019, 2020 na2021.
Hurtigruten anotarisira kuisa mari inodarika mamirioni mazana masere nemakumi mashanu emadhora mukuvaka giraidhi rakasvibirira pasi rose.
- Uku kungori kutanga. Hurtigruten ndiyo yepasirose yekufambisa rwendo rwepasi rose, iyo inouya nebasa. Sustainability ichave yakakosha mutyairi wenguva nyowani yekutakura uye yekufambisa indasitiri. Hurtigruten's isingaenzanisirwe mari mune yakasvibirira tekinoroji uye hunyanzvi hunogadza hutsva hutsva hwese indasitiri kutevedzera. Chinangwa chedu chikuru ndechekushandisa zvikepe zvedu kuburitsa pachena, Skjeldam anodaro.
Kuvaka pamakore zana nemakumi masere nemaviri eNorway yekupayona nhaka, Hurtigruten nhasi ndiyo kambani hombe yepasirese yekufambisa.
Hurtigruten inokura nekukurumidza ngarava yetsika-kuvaka shambadziro ngarava dzinotora vafambi vemazuva ano vafambi kuenda kunzvimbo dzinoyevedza pasi rese paPlanet yedu - kubva kuHigh North kuenda kuAntarctica kumaodzanyemba.
Hurtigruten iri kuunza ngarava dzepasirese dzekutanga dzakauchikwa, MS Roald Amundsen uye MS Fridtjof Nansen. Yechitatu hybrid powered expedition ngarava ichawedzerwa kune zvikepe muna 2021.